Abaphakeli nabahlinzeki | Ifektri yase-China Wheelchair Lift
Ukuphakanyiswa kwesihlalo esinamasondoidizayini ekhethekile yabantu abakhubazekile futhi ilifti ekhubazekile ingakusiza laba bantu abakhubazekile bakhuphuke izitebhisi kalula. Isisetshenziswa sisebenzisa uhlelo lokulawula oluhlakaniphile, uhlelo lokulawula olunemikhawulo eminingi, oluyimodemu, futhi olunenethiwekhi olungacubungula idatha ngokuhlekisa, okwenza uhlelo lokusebenza kwekheshi luzinze kakhudlwana.
Indawo yokuhlala yase-China Wheelchair Lift Supplier Residential ngeNtengo Yezomnotho
Isiphakamisi esiqonde mpo senzelwe abantu abakhubazekile, okukulungele ukuthi izihlalo ezinamasondo zikhuphuke zehle ezitebhisini noma ngaphezulu kwezitebhisi zokungena emnyango. Ngasikhathi sinye, ingasetshenziswa futhi njengelifti elincane lasekhaya, elithwala abagibeli abathathu futhi lifinyelela: ukuphakama kwe-6m.
Uma isiza sakho sokufaka singenaso isikhala esanele sokufaka ilifti yesihlalo sabakhubazekile mpo, khona-ke uhlobo lwesikisi lwesihlalo sabakhubazekile kuzoba ukukhetha kwakho okuhle. It is ikakhulukazi efanelekayo ukusetshenziswa ezindaweni nge limited ukufakwa amasayithi. Uma kuqhathaniswa nokuphakama kwesihlalo sabakhubazekile, isihlalo esinamasondo esikisi
Ngasikhathi sinye, kusetshenziswa umshini odonsa uzibuthe ongaguquguquki unomphela, othuthukisa izinga lokusetshenziswa kwesakhiwo nokusebenza kokushayela kwekheshi. Amandla kagesi angenziwa ngezifiso futhi afaniswe ngokusho kwamandla wendawo yekhasimende. I-disc brake eyakhelwe ngaphakathi yenza ukusebenza kwekheshi kuphephe, ivolumu incane kunenjini yendabuko enkulu ngaphansi komthwalo ofanayo, futhi ukuthwala okuvalekile akudingi ukuthambisa igrisi. Uma udinga lokhu kukhuphuka okukhubazekile, sicela usinikeze usayizi othile wetafula, umthwalo nemingcele yokuphakama, kanye nezithombe zangempela zendawo ethize yokufaka, futhi sizohlela abaklami abangochwepheshe ukuthi baklame futhi benze ngezifiso ngokuya ngezidingo zakho ezithile.